Waxaa jira xalal dhowr ah suuqa maanta. Markii la baarayo kuwa kala duwan, xuduudaha muhiimka ah qaarkood waa in maanka lagu hayaa. Midka hore waa isdhexgalka - xalalka soo kabashada xayeysiinta waxaa lagu fulin karaa dhanka server-ka, CDN (Shabakada Bixinta Macluumaadka) ama dhinaca macaamilka. Labada dhinac ee server-ka iyo iskudhafka CDN waa kuwo isku dhafan oo aad u faragalin badan, waxayna badanaa ubaahan yihiin isbeddelo waaweyn qeybta daabacaha oo ay kujiraan howlahooda xayeysiinta.
Hadafka Onit waa inuu u oggolaado milkiilayaasha bogagga inay ilaashadaan qaabkooda ganacsi, iyagoo sidoo kale raadinaya khibradaha dadka isticmaala. Waxaan u shaqeynaa si waafaqsan Tilmaamaha Isbahaysiga ee Xayeysiinta Better, taas oo aan dareemeyno inaan u dhigeyno meel dhexe daabacayaasha iyo adeegsadayaasha labadaba.
Marka heerka xayeysiinta xayeysiinta loogu talagalay Mako, Barta madadaalada ee Israel hogaamineyso, waxay gaartay 33% waxayna si weyn u waxyeeleysay howlgalkooda ku saleysan xayeysiiska, waxay bilaabeen inay raadiyaan xal. Sida Uri Rozen, Maamulaha guud ee Mako uu sheegay, Marka ayaa ah xalka kaliya ee u ogolaaday iyaga inay sii wataan ganacsigooda xayeysiinta iyagoo aan wax carqalad ah kala kulmin. Adoo adeegsanaya xalka 'Onit', Mako wuxuu awood u yeeshay inuu ku bixiyo ololeyaal xayeysiis ah xayeysiinta isticmaalayaasha tan iyo Juun 2016, iyo dhowaan, wuxuu bilaabay inuu u adeego xayeysiisyada fiidiyowga ee qodobbada qodobka iyo adeeggooda ballaaran ee VOD. Ku darsigiiititit ee Mako ayaa soo bandhigay dakhliga xayeysiiska Mako taasoo keentay koror aad uxun 32% -39% intii udhaxaysay Janaayo iyo May ee 2017.